Mayelana Nathi | WOWOW Faucets-WOWOW Ompompi
Ikhaya / Inkampani
Ku-WOWOW, sikholwa ukuthi ufanele okungcono kakhulu. Njengengxenye yenkuthazo yethu yokuqala yokuba khona, inkampani yethu izinikele ekukunikeni okungcono kakhulu kwakho konke esingakunikeza: izintengo ezinhle kakhulu, imikhiqizo emihle kakhulu, ukusungulwa kwanamuhla okuhle kakhulu, futhi bonke abanezinsizakalo ezinhle zamakhasimende ezizokwenza uzizwe njengobukhosi.
Njengoba ibisemakethe kusukela ngo-2008, inkampani yompompi kaWOWOW ibilokhu ilwela ukunikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Eminyakeni edlule, sandise ngokucophelela nangamabomu iqoqo lethu ukuze lifake cishe konke esingakwenza ekhaya lakho:
• Izesekeli zasekhishini: ompompi basekhishini kanye nehadiwe okwenziwe ngesimanje, okuhambisanayo nokwenziwe ngekhwalithi. Donsela phansi ompompi basekhishini abahlangabezana nezidingo zomndeni zesimanje ngokusebenza kanye nobuchwepheshe kudizayini ehlelekile.
• Izesekeli zegumbi lokugezela: Sithatha lo msebenzi ofanayo futhi siwusebenzise kunoma yikuphi ukugeza futhi. Ukusuka emaphepheni okugeza kuya ezisekelweni zokugeza ezifana namathawula wethawula nezamaphepha endlu yangasese kuya ohlelweni olugcwele lokugeza, konke kunikezwa ngefomu olifunayo.
Sivumelanisa nezimo njengoba izinhlelo zethu zokuphatha ikhwalithi zenza. Ukuze uhlinzeke ngezidingo zakho, siyohlala senza lokho esingakwenza ukukhiqiza ama-faucets amahle kakhulu, izesekeli zekhompiyutha nezesekeli, nazo zonke izinto ezinhle kakhulu, sonke ngenkathi sigcina umaki wentengo ephansi ukuze ukwazi ukuthola iphakethe eligcwele leqiniso.
Ukulungele ukwenza i-WOWOW yakho ihabhu lokuya kubakhiqizi bepompo yekhwalithi? Xhumana nathi namuhla ku- [info info] bese uqala uhambo lwakho.
Isihloko sakho: Kitchen Bathroom Shower
XHUMANA NATHI ENGEZA: 8 IGREEN STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. EU.SA I-TEL: 3322585000 I-imeyili: sales@wowowfaucet.com